Nidaamka EFI xijaab kaas oo sidoo kale loo yaqaan xijaab gaar ahaan waa heer ah in la soo saaro si loo hubiyo in drives adag iyo sidoo kale qalabka lagu kaydiyo dibada ka yimaada sida drives adke u hoggaansamaan la Midaysan Extensible firmware interface in waxa kale oo loo yaqaan UEFI oo la soo bandhigay iyadoo xijaab GPT in la soo bandhigay by Corporation Intel ka.
Nidaamka ayaa lagu soo bandhigay in la hubiyo in loader boot oo uu soo gundhig gudahood waa inuu xaqiijiyo in firmware UEFI culayska OS ah iyo sidoo kale biilasha kale sida ugu dhakhsaha badan nidaamka la bilaabay. Gaar ahaan waxaa formatted file nidaamka oo utility ku salaysan yahay nidaamka file buurbuuran iyo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in user waa in sidoo kale la hubiyo in faahfaahinta habka file ah waxaa lagu daaweeyaa ka faahfaahinta baruurta asalka ah ka duwan ee la isticmaalayo. Preload boot ayaa sidoo kale wuxuu hubiyaa in nidaamka ugu rarataan culaysyo faylasha loo baahan yahay in la rarin ka hor habka kabaha dhameystiray. Waxa intaa dheer in waxan oo dhan ayaa waxaa sidoo kale in la xusay waa in user waa in sidoo kale la hubiyo in khaladaad la xiriira ka bilowdo iyo biilasha ayaa waxaa sidoo kale la xaliyo iyadoo la isticmaalayo nidaam boot this. Marka la soo koobo loader kabaha waa qayb ka mid lagama maarmaan ah OS ah taas oo ka dhigaysa hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah waayo-aragnimo tahay waa waxa la siiyaa user ee la xiriirta nidaamka.
La shaqeynta nidaamka EFI xijaab
Isticmaalka nidaamka file EFI waa wax ka duwan habka nidaamka iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in Linux, Windows iyo xitaa Mac leeyihiin hab u gaar ah oo lagu daaweeyo la socdaan barnaamijyada laakiin waa hubaal in saddex dhan barnaamijka si buuxda kordhiyo iyo in la hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeegyada farshaxanka waxaa lagu bixiyaa si user ah in arrintan la xiriira. Ka dib waa guudmar ah ee shaqada oo dhan OS ku xusan lagu daro nidaamka xijaab EFI.
Diirdiir 2 iyo elilo waa labada tababare ee boot UEFI in loo isticmaalo OS Linux ah. Iyadoo aan la xadidayn u EFI xijaab weyn ama nidaamka file tababarayaasha boot, kuwaas oo hubiyo in images yaruna iyo adeegyada kale ee nidaamka waxa lagu heli hab waxaa loo arkaa inay ugu fiican iyo gobolka of farshaxanka arrintan la xiriira ka dhigi kara. The boot kuunoqon EFI sidoo kale waa qayb kale oo ay tahay in la tixgeliyo marka ay timaado yaruna Linux sida uu hubiyaa in loader boot OS waxaa loo isticmaalaa si waafaqsan kuwaas oo mar isticmaalo oo ay ku shuruudaha nidaamka iyo raraha boot dhaqameed ka adkaaday nidaamka MBR. Sidaa darteed waa iska cadahay in Linux ayaa sidoo kale loo arkaa nidaamka MBR faylka sida dhacsan iyo horumarinta ayaa xaqiijiyey in OS la wareejiyo GPT Risaalo oo halkan ku nidaamka xijaab EFI.
Shuruudaha daaqadaha waa xoogaa ka duwan asalka EFI nidaamka qoruhu siday u baaqay users in loader kabaha waa in lagu xiro xijaab hore ee drive ka taas oo shaki ma aha shuruudaha asalka EFI nidaamka Risaalo. Amarka on 32 yara oo 64 yara OS sidoo kale ku kala duwan yihiin arrintan la xiriira iyo in la hubiyo in xijaab la heli gudahood cusub 64 yara OS user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in mountvol ah / s amarka waxaa maamula si ay u sameeyaan isbedel qaabeynta oo hubiyo in loader kabaha ugu rarataan culaysyo kaliya kuwa files waxaa looga baahan yahay in ay dadka isticmaala iyo biilasha kale ee naafada ah ka dhigi lahaa.
On Mac iyo Intel nidaamyada ku tilmaamay user u baahan yahay si loo hubiyo in ugu fiican iyo kan gobolka ee adeega farshaxanka waxaa lagu heli by in la hubiyo in xijaab EFI aan la isticmaalo booting nidaamka. Iyadoo la tixraacayo OS in ka yar yahay wadahadal waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in nidaamka utility EFI loo isticmaalo si ay u casriyaynta iyo updates yihiin in posted by shirkadda si loo hubiyo in OS la updated on joogto ah. Si aad u ordaan OS ee hab firmware flash waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in buugga EFI / Apple / firmware waxaa loo isticmaalaa si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo hab ugu fiican. Mid ka mid ah xaqiiqda oo xiiso dheeraad ah oo la xiriirta ka EFI iyo Mac waa in xitaa haddii user ee tirtirtaa xijaab EFI ee nidaamka weli kabaha doonaa, laakiin on lid ku ah casriyaynta nidaamka gabi doono si nidaamka aan la doono la casriyeeyay ilaa xijaab EFI la beddeshay.
Sidee in ay tirtirto ah nidaamka xijaab EFI
Dadka isticmaala qaar ka mid ah arrintan waxaa laga yaabaa in muhiimada sida ikhtiyaarka waxaa mararka qaarkood grayed baxay iyo dadka isticmaala laylis ka walwalsan caafimaadka disk iyo xaaladda ay iminka ku jira.
Waxaa sidoo kale loo gudbiyo xijaab sida ilaaliya oo maamulka disk daaqadaha ma awoodo in ay tirtirto, laakiin ma walwalo arrinta sida waxaa jira siyaabo dhowr ah si loo hubiyo in xijaab la tirtiray iyo Risaalo ka akhrin loo abuuray in arrintan la xiriira. Si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in nidaamka soo socda waxaa laga codsadaa si aad u hesho natiijooyinka la doonayo in si fudud oo dhakhso ah hab:
Tirada disk ka halkaas oo Risaalo waa in laga saaro waa in la ogaadaa tixraac maadaama ay tani soo galo shaqada ka dib ee nidaamkan:
Degdeg ah amarka waxaa markaas in la furay sida admin ah in ay sii wadi arrintan la xiriira:
Amarka diskpart waxaa markaas in la qoro sida ugu dhakhsaha badan uu suuqa soo booda,
Hoggaanka liiska disk waxaa markaas in loo isticmaalo si loo hubiyo in dhammaan qoruhu nidaamka noqon arki karo in ka badan interface DOS ah:
In disk # dooro amro # waa in la bedelaa tirada disk in ay tahay in la tirtiro, waa tiro la mid ah oo la xusay in talaabada ugu horeysa:
Taliska nadiif ah ka dibna in la siiyo si ay u sii wadi arrintan la xiriira:
Sida tallaabo la soo dhaafay user ay u baahan tahay si aad u hubiso in amarka baxo waxaa la siiyey in ay xirto degdeg ah iyo si aad u dhamayso ee buuxa:
> Resource > Ladnaansho > All u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan nidaamka xijaab EFI